Aya mazaruriro anoshamisa pamusoro paMeghan Markle akanyorwa pane chidziro chekuberekwa d - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Izvi zvizaruriro zvinoshamisa pamusoro paMeghan Markle zvakanyorwa pane chizvarwa chekuzvarwa
Aya mazaruriro anoshamisa nezveMeghan Markle akanyorwa pane chizvarwa chekuzvarwa d
Tinoziva zvakawanda pamusoro pokuberekwa kwechecheche Archieuye panguva imwe chete, pane amai vake. Zvechokwadi, Zuva akawana chiziviso chekuberekwa kwechechecheche, iyo inowanikwa mashoko pamusoro Meghan Markle. Pamusoro pebhuku rakabudisa 17 May 2019, Meghan Markle inotaurwa se "Princess weUnited Kingdom", iyo ndiyo imwechete iyo Kate Middleton vakanga vakanyorwa kuti zvekuzvarwa kwevana vake. "Rachel Meghan HRH Duchess pamusoro neSussex," izvozvo akati "zita wokutanga" zvichiteverwa yokwaakazvarirwa (California, USA) uye kero, kureva "Frogmore Cottage Windsor Castle", apo iye akasimbisa dzokugara nguva pfupi asati aberekwaArchie. saka, "Meghan" ndiro zita riri pakati weDuchess of Sussex, uyo chaizvoizvo anonzi Rachel, semunhu wake munyaya dzakatevedzana Suits.
Uyezve, chizvarwa chekuzvarwa chinoratidza izvo Meghan Markle akabereka paPortland Hospital Private Clinic. Imba yacho inopa masiteti ekugara pakati pe2000 ne20 000 euros. Ndiyo apo muBrithani nyanzvi Victoria Beckham akabereka vana vake.
Asi iyo Portland Hospital yeLondon yakanga isiri chisarudzo chekutanga cheMeghan Markle kubereka mwana wake Archie. Zvechokwadi, Duchess haana kumbovanza chido chake chokuzvara mwana wayo kumba kwake muFrogmore Cottage.
Usapotsa chero chiitiko cheVermermag.fr nekugamuchira zvakananga kuchenjerera kuburikidza naMutumwa
© Sangano / Kusarudzwa
Muchinda Harry, Duke weSussex, uye Meghan Markle, Duchess of Sussex, Mucheche, Meet Art
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/royautes/ces-etonnantes-revelations-sur-meghan-markle-inscrites-sur-le-certificat-de-nais-970264
Arafat Dj: "Nezvandairarama, handisisiri kuvimba nemunhu"
Donald Trump anorondedzera hondo Huawei nekudzivisa marimi muUnited States
240 $ Discount pa Breville Coffee Machines, 160 $ Robotic Vacuum, Plus - BGR